အနာမျိုး (၉၆)ပါး သင်သိပါသလား ? ~ ITmanHOME
10:54 BodyHealth, FaceSkinBeauty, health, knowledge No comments
အနာမျိုး (၉၆)ပါး သင်သိပါသလား ?
အနာမျိုး(၉၆)ပါး ရောဂါများ ကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြတယ် ဒါပေမဲ့ ......သင်သိပါသလား ?
မြန်မာရိုးရာဆေးပညာ အရ အနာမျိုး(၉၆)ပါး ရှိပါသည် ။
1. စက္ခုရောဂါ (မျက်စိရောဂါ)
2. သောတရောဂါ (နားရောဂါ)
3. ဃာနရောဂါ (နှာခေါင်းရောဂါ)
4. ဇိဝှာရောဂါ (လျှာရောဂါ)
5. ကာယရောဂါ (ကိုယ်၌ဖြစ်သောရောဂါ)
6. သီသရောဂါ (ဦးခေါင်း၌ဖြစ်သောရောဂါ)
7. ကဏ္ဏရောဂါ (နားရွက်၌ဖြစ်သောရောဂါ)
8. မုခရောဂါ (ခံတွင်း၌ဖြစ်သောရောဂါ)
9. ဒန္တရောဂါ (ခံတွင်း၌ဖြစ်သောရောဂါ)
10. ကာသော (ချောင်းဆိုးရောဂါ)
11. သာသော (ပန်းနာရောဂါ)
12. ပိနာသော (ထိပ်ကပ်နာရောဂါ)
13. ဒါဟော (ကိုယ်ပူရောဂါ)
14. ဇရော (အဖျားရောဂါ)
15. ကုစ္ဆိရောဂေါ (ဝမ်းဗိုက်၌ဖြစ်သောရောဂါ)
16. မုစ္ဆာ (မူးမေ့သောရောဂါ)
17. ပက္ခန္ဒိကာ (သွေးဝမ်းရောဂါ)
18. သူလာ (ထိုးအောင့်သောရောဂါ)
19. ဝိသုဓိကာ (ဝမ်းရောဂါ)
20. ကုဋ္ဌ (နူနာရောဂါ)
21. ဂဏ္ဍော (ထွက်မြင်းနာရောဂါ)
22. ကိလေသော (ပြောက်ကျားသော ခရုသင်းနာ)
23. သောသော (မြစ်ခြောက်နာ)
24. ဒန္ဒု (ဝဲကြီးဝဲစိုနာ)
25. ကဏ္ဍု (ဝဲခြောက်နာ)
26. ကစ္ဆု (ပွေးနာ)
27. ဝိကစ္ဆိကာ (လက်ဖဝါး ခြေဖဝါး ကွဲသောအနာ)
28. လောဟိတပိတ္တံ (သွေးအံ သွေးကျနာ)
29. မဓုမေဟော (ဆီးချိုရောဂါ)
30. အံသာ (မြင်းသရိုက်ရောဂါ)
31. ပိဠကာ (ထွတ်အိုင်းနာ)
32. ဘဂန္ဒလာ (ဘရင်ဂျီနာ) - ပေါင်း အနာမျိုး(၃၂)မျိုးရှိသည်။
ထိုအနာ(၃၂)မျိုးတို့ကို လေ၊ သည်းခြေ၊ သလိပ် တည်းဟူသော ဒေါသပျက်(၃)မျိုးနှင့် မြှောက်လျှင် အနာမျိုး(၉၆)ပါး ဖြစ်သည်။